I-Pottery Phonsa Phansi Isizini yesi-5 isilapha - Ukuzijabulisa
Umbono Ngezitsha Zobumba Ezinkulu Phonsa Phansi
I-Pottery Phonsa Phansi Isizini 4 Yaphela Kanjani?
I-Pottery Phonsa Phansi Isizini yesi-5
I I-Pottery Enkulu Phonsa phansi bakhethe umpetha wabo wesine ngoMashi 14 ngemuva komdlalo wamanqamu owawubandakanya umsebenzi onzima wokujikijela ukuze kwakhiwe indishi yepunch ye-Art Deco enhle kanye nezinsimbi ezintekenteke kakhulu. Kube wumnqamulajuqu we-tearjerker, neziqephu eziningi, futhi abalandeli badabukile ukuvalelisa. Kodwa isizini 5 yeThe Great Pottery Throw Down izowudlala nini okokuqala ngqa? Ngesikhathi sokuvalwa kwesithathu, kunikeze umdlalo onempilo, futhi uma ufuna ukuphonsa esitudiyo sikaRich Miller noKeith Brymer Jones, ukuqoshwa kwefilimu yesizini elandelayo kuqala ngokushesha kunokuba ucabanga.
Funda kabanzi:- Uyafuna Ukwazi Ngokubalingisi Nezibuyekezo Zakamuva Ze-House Of Ho Season 2?
I-Great Pottery Throw Down wumbukiso womncintiswano wethelevishini waseBrithani owaboniswa okokuqala ku-BBC Two ngoNovemba 3, 2015. Umncintiswano ofana ne-Great British Bake Off kanye ne-The Great British Sewing Bee, kodwa ugxile ezintweni zobumba.
USara Cox wayengusokhaya kumasizini amabili okuqala, kwathi uKate Malone noKeith Brymer Jones babengamajaji angochwepheshe. URichard Miller, owayedlala i-kiln guy Rich futhi wasebenza njengochwepheshe bangemuva kwesigcawu, naye uvele kumasizini amathathu okuqala.
I-Great Pottery Throw Down, esanda kuqala isizini entsha ku-Channel 4, imnene kunayo yonke, eyinqaba, futhi inobungani kunayo yonke emiqhudelwaneni eminingana ehlakaniphile ye-TV. Kwenza i-Bake Off ibonakale njengomncintiswano we-gladiatorial futhi I-Great British Sewing Bee ibukeke njengomcolo we-glitz yasemadolobheni. Uma amazwi aphawuleka ka-Paul Hollywood ozazisayo ku-Bake Off ewukuxhawula amathambo, ijaji eliphakeme lika-Keith Brymer Jones ku-Pottery Throw Down liqhuma isililo. Emlandweni wethelevishini yesikhathi sokuqala akukaze kube khona indoda ekhulile ekhale kakhulu - futhi yinhle.
Ababumbi abayizimfundamakhwela abayishumi nambili balwa bodwa, amajaji u-Keith Brymer Jones (owaziwa ngomsebenzi wakhe wamanzi odumile) kanye nosanda kufika u-Sue Pryke bebeka izithiyo ezinzima ngokuqhubekayo. Ababumbi abane bokugcina bazozama ukwakha indlu yangasese esebenza ngokuphelele esiqeshini sesishiyagalolunye. Kulungile, ufunda lokho ngendlela efanele. Yebo, lokhu kusho ukuthi amajaji kuzomele awahlole, ngakho-ke lindela uBrymer Jones ukuthi ahleke kakhulu futhi akhale kakhulu.
Okuthunyelwe okwabiwe nguRichard Miller (@richmillerpots)
Funda kabanzi:- Ingabe Impi Phakathi kuka-Kong no-Godzilla Iyaqhubeka Ngokulandelana?
Iviki Lengadi, futhi ababumbi abasasele kufanele bakhe isici samanzi ezilwane futhi bajikijele isitjali samasitrobheli ukuze badlulele kumakota-final. Ababumbi abasele bakhiqiza izitsha zobumba ze-Acoma ezishiswe ngobulongwe benkomo bese bephonsa ibhodlela lendandatho lase-Alabama ku-quarter-final yama-America wonke ukuze bathole indawo ku-semi-final.
Amasemi-final, futhi ababumbi abasindile bayaqhudelana Evikini Lokugezela Lokugeza ngokudala usinki wezinyawo obabazekayo nosebenza ngokuphelele nokuhlobisa ibhodwe legumbi ukuze bathole indawo kowamanqamu. Ababumbi benza i-punch bowl kanye ne-decanter kowamanqamu we-art deco-inspired ngaphambi kokubhekana nomsebenzi omncane wokujikijela owake wamiswa. Ubani ozomenyezelwa njengompetha wochungechunge?
Funda kabanzi:- Abafazi Bangempela Bezindlu BaseNew York City Isizini 13 Ulwazi Oluphelele!
Ngokungeziwe kumsingathi omusha ojabulisayo e-Siobhán McSweeney (odlale u-Sister Michael obhuqayo ku-Derry Girls) kanye nejaji elisha emdlalweni omnene, okhuthazayo u-Richard Miller, owayengungcweti wezobuchwepheshe noma owesilisa, isizini yakamuva inejaji elisha uRichard Miller omnene, okhuthazayo, owake waba uchwepheshe wezobuchwepheshe noma indoda yaseziko. URose Schmits, i-ceramicist enekhono, uthatha indima yakhe yangaphambilini (njengentombazane yaseziko).
Futhi kuwukuphela kohlelo lohlobo lwayo olugxile endaweni ethile namasiko: iStoke-on-Trent, i-Staffordshire, indawo okwazalelwa kuyo izitsha zobumba zaseBrithani kusukela ngekhulu le-18.
Funda kabanzi:- UStanley Tucci Uza Ngokuthungatha Uchungechunge lwase-Italy
U-Keith Brymer Jones ubuyile njengejaji kuSizini 4 se-The Great Potter Throw Down. UBrymer Jones ubeyingxenye yohlelo kusukela ekuqaleni, futhi nakuba kube nezinguquko ezithile phakathi neminyaka, ukuba khona kwakhe bekulokhu kuhlezi. Cishe uzobuya ngesizini yesi-5. Isizini 4 ifake abalingisi abasha abambalwa ngaphezu kuka-Brymer Jones. URichard Miller ube yijaji, kwathi uSiobhán McSweeney weDerry Girls wathatha izintambo njengosokhaya omusha. Okwamanje akukho okukhombisa ukuthi uMiller kanye/noma uMcSweeney bazobuya yini, noma ukuthi izibopho zabo zizothathwa amaBrits amasha amnandi.
I-Wu-Tang: Isizini yesi-3 yeSaga yaseMelika: Izinto Odinga Ukuzazi!
I-Santos ithuthuka ngokuqasha u-Paulo Henrik Conso waseFluminense